Maxay yihiin dembiyada lagu helay Yugaandheyskii laga eryay dalka - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wasaarada arimaha dibedda oo war siisay saxaafada caalamka ayaa markii gu horeysay si rasmiya u faahfaahisay sababta dalka loo eryay danjirihii Yugaandha ee ku xigeenka u ahaa Amisom.
”Wuxuu isku dayay inuu aaso dadkii Somaliyeed ee Amosom ku xasuuqday xerada Golweyn ee gobolka Sh Hoose ayaa lagu yiri qoraalka wasaarada. Waxa kale oo lagu helay inuu masuul ka ahaa Somali dhibaato loogu gaystey xerada Xalane sida gabdho si anshax xumo loola dhaqmay.
”Wuxuu kaloo farogeliyay ganacsiyo dad Somaliyeed ka fushanayeen xerada Xalane isagoo ka raadsanaya dano dhaqaale ayuu yiri wasiirka arimaha dibedda. Dacwadiisa mar hore ayaan u gudbinay midowga Afrika.
Waxa kale oo wasiirku sheegay in uu wargeliyay dalka uu ka soo jeedo una sheegay in shaqsi xumayn karin xiriirka lbada dal. Si kastaba ha ahaatee talaabada wasiirka ayaa cashar u ah kuwa kale ee isku dayaaya inay dhibaateeyan qaranka.